Dhageyso: Warbixin ka hadlaysa sida qofku u midayn karo waxbarasho iyo shaqo | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Dhageyso: Warbixin ka hadlaysa sida qofku u midayn karo waxbarasho iyo shaqo
Dhageyso: Warbixin ka hadlaysa sida qofku u midayn karo waxbarasho iyo shaqo
Posted by: radio himilo March 15, 2017
Muqdisho – Dad badan marka ay arkaan arday u socda dugsi wax-barasho waxay durba sawirtaan fursadda uu helay. Hayeeshe, marka lasii daba-galo sheekooyinka ardayda qaar, fursadaha ay helaan kuma dhashaan oo kaliya dareen waalid iyo darajooyin isku mid ah.
Halka waalidka awooda inuu carruutiisa ka yeelo sida uu doonayo inay mustaqbalka u ekaadaan – uu ku bixiyo adduun kasta oo uu heysto, waxaa jira waalidiin kale oo fursad ka arka xoogga carruurtooda oo aan helin ayaanka ama nasiibka ay ku dhisaan mustaqbalkooda.
Waxa lagu fahmo waalidiinta dantu biday inay ku noolaadaan xoogga iyo dhididka carruurtooda ku jira xilligii ay wax-baran lahaayeen ayaa laga gartaa wajiyada da’yarta aad maalin kasta laga yaabo inaad kula kulanto waddooyinka magaalada – sida Baalashlayaasha iyo wixii soo raaca.
In kasta oo aadan ka garan karin jaaha kore sida ay door iyo kaalin muuqata ugu yihiin reerahooda, hadana waxay ku jiraan waaya’aragnimo ay adag tahay inaad suuraysato.
Daalka kaga yimaada natiijada ku dhalata waqtiga badan oo ay ku jiraan howlahooda ama ku yaraanta fursadaha nasiinada, waa iska caadi in badi da’yarta xoogsata ay iska dhaadhiciyaan inaysan heli karin xilli bannaan oo ay wax-ku bartaan.
Hayeeshe in-yar oo kamid ah da’yarta shaqooyinkooda ku anfaca nolosha reerahooda, ayaa wali kusii hal-adkeysta in wax ka qiimo weyn nolosha maanta ay ku bixiyaan cimrigooda. Waana taas marka ay go’aansadaan inay kamid noqdaan da’yarta wax-barata.
Iyaga oo aan ku tiirsanaaneyn deeq uga imaanaysa reerahooda, hadana wali waxay qarashka uga soo hara gunno maalmeedka ama mushaharkooda ku bixiyaan inay wax ku bartaan.
Mid kamid ah kumaankunka arday ee waaya’aragnimadaas wax ku baranaya waa da’yar lagu magacaabo Cabaas Abdiraxman Maxamed, oo 24-jir ah oo hadda heer gabagabo ah ka maraya tacliinta dugsiga sare.
Kusii dhiirra-shada shaqadiisa iyo ku hal-adaygista hankiisa dheer, Cabbaas, wuxuu tilmaamay inuu yoolkiisu ahaa socodsiiyaha turxaan bixiyay mihnadiisa shaqo iyo madhaafaanka waxbarashadiisa.
U dabaal-degista gabagabada wax-barashadiisa, isaga iyo kuwa lamidka ahba waxay mahad u celinayaan xarumaha wax-barashada ee u sahlay inay hankooda u rumeeyaan.
Wariyaheenna Zakariya Xasan Maxamed ayaa la kulmay Cabbaas. Wuxuuna kala sheekeystay waaya’aragnimadiisa ku aadan noloshiisa; wixii ku qaaday go’aanka uu maanta guranayo mirihiisa iyo wixii ka saaciday hirgalinta himiladiisa.
Ugu horreyn wuxuu hordhigay su’aal aheyd: goortii ay ku dhalatay inuu wax-barto. Wuxuuna ku jawaabay:
Previous: Buffon: “Leicester majecli inaan ku kulanno tartanka Champion League-ga”